केपी सरकारमा जनतालाई सास्ती, भ्रष्ट र तस्करलाई मस्ती – Mahilajagaran
केपी सरकारमा जनतालाई सास्ती, भ्रष्ट र तस्करलाई मस्ती
दिलमाया शाही । १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार मा प्रकाशित
जुम्ला । नागरिक भएको हैसियतले रानजीतिमा सामान्य चासो चिन्ता हुन्छ नै । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रो लाई नराम्रो भन्न मन लाग्छ । गत पुसबाट देशको अवस्था ,जनताको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन । महामारी विश्वभरी फैलिएको छ । यो रोक्न सकिदैन थियो । तर यसबाट बच्ने उपायहरु,अस्पतालमा सुधार , अस्पतालमा चाहिने अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ,अक्सिजन लगायतका अति आवश्यक सामानको व्यवस्था सरकारले समयमा नै गर्न सक्थ्यो ।
केपी शर्मा ओली तपाई प्रधानमन्त्री भएर पनि उखान टुक्कामा रमाउनु भयो । तपाईका साइबर स्यालहरुलाई वरीपरि राखेर । उनीहरुले तालि बजाएर तपाईले उखान टुक्का हाल्नु भयो । अझ पुस ५ गतेबाट त तपाई र ०६२–०६३को आन्दोलन ताकाको ज्ञानेन्द्र शाह एउटै लाग्छ मलाई । तपाई आफूलाई कम्युनिस्ट हु भन्नु हुन्छ । अझ राजनीति परिवर्तनकोलागि १४ बर्ष जेल बसेको फूर्ति लगाइ राख्नु हुन्छ । के केहि थान आफू निकटलाई राज्यको सम्पतिमाथि हालीमुहाली गर्न र नियुक्तिमा झापाली र गुटका कहि कतै काम नलाग्नेलाई नियुक्ति दिनलाई जेल बस्नु भएको हो ? साच्चै देश र जनताकोलागि जेल बसको जस्तो त लाग्दैन तपाईको बोली ,व्यवहार र चिन्तनबाट ।
१९ बर्ष राजनीति परिवर्तनकोलागि जेल बसेका नेलशन मण्डेला, भारतको स्वतन्त्रताको लागि जेल बसेका महात्मा गाँधीको जीवन , कर्म र चिन्तन पढ्नु भएको होला प्रधानमन्त्री ज्युले । यदि अहिले सम्म उखान टुक्का मात्र कण्ठ गरेको भए एक पटक पढ्नु होस । अनि उहाँहरुले गरेको काम , जीवन व्यवहार र आफूले गरेको काम,जीवन व्यवहार दाज्नु होस् । नेता हुनलाई जेल बस्नु मात्रले पुग्दैन । नेता भनेको देशको समाजको नेतृत्व कर्ता हो नकि उखान टुक्का हालेर दुनिया हसाँउने कमिडियन ।
मैले बहुदल र गणतन्त्र देख्न र भोग्न पाए । केही हिजोका तुलनामा धेरै नभएपनि अलि अलि परिवर्तन आएको छ जस्तो लाग्छ । बहुदल ल्याउन र अझ गणतन्त्र ल्याउन धेरैले त्याग तपस्या र बलिदानी दिएका छन् । यो देशमा गणतन्त्रको नारा लगभग धेरै ओझेल परिसकेको थियो । तर ०५२ सालमा माओवादी आएर गणतन्त्र भन्दै गाउँ गाउँ राजनीति सन्देश दिन थाले । म र माओवादी जनयुद्ध संगै हुर्केयौ । जनयुद्धको जगमा ०६२–०६३को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो ।
तर त्यहि ०६२–०६३को जनआन्दोलनलाई बयल गाडा चढेर अमेरिका जानु र यो आन्दोलनले गणतन्त्र आउनु एउटै हो भन्नु हुदो रहेछ जुन भिडियो अहिलेपनि हेर्न र सुन्न पाइन्छ । तपाई त जनताको बललाई विश्सास नगर्ने मानिस हुनु हुदो रहेछ । कसरी कम्युनिष्ट हुनु भयो । अहिलेपनि अचम्म पर्छु । कम्युनिष्ट त जनताको शक्तिमा विश्वास गर्छन । अलि अलि पढेकी छु । लेनिनले जनताको बलमा रुसमा जारको शासन सत्ता पल्टाए । चिनमा माओले पनि जनताको बलमा विदेशी र स्वदेशी सत्तासंग लडेर जिते । तपाईले कसरी भन्न सक्नु भयो है बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र आउनु एउटै ।
बिडम्बना तपाईको हातमा नै गणतन्त्र पछि दुई पटक शासन सत्ता पुग्यो । सौतेनि आमाको हातमा बच्च पुग्नु र तपाइको हातमा गणतन्त्र पुग्नु एउटै हो । बच्चाले दुःख पाउछ सौतेनि आमाको व्यवहारले । हामीले दुःख पाइरहेका छौ तपाइको हातमा गणतन्त्र पुगेपछि । सौतेनि आमा सुरु सुरुमा सौताका छोराछोरीलाई देखाउनकैलागि नहाइ धुवाइ दिने गर्छन तर विस्तारै आफ्नो असली रुप देखाउछन् । तपाईले पार्टी एकता हुदा त्यस्तै गर्नु भयो । तर आज आफैले एकता गरेको र दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री विश्वासको मत माग्दै संसदमा गिड्गिडाउदै बोलेको सुन्नु परेको छ । यसको सबै दोष तपाई केपी ओलीलाई नै जान्छ । अरुको दोष छैन भन्ने होइन । तर देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बर्वादि तपाईले गरेको हो , यो मेरो मात्र मत होइन आम नेपालीको मत हो ।
बहुदल र गणतन्त्र आएपछि धेरै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने । कहिले कांग्रेसको नेतृत्पमा सरकार , कहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार, कहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने । जसको नेतृत्वमा बनेपनि यति लाछि सरकार कसैको नेतृत्वमा बनेन ।
हो, सबै भन्दा बढी जनताले आशा गरेको सरकार आमोवादीकै थियो तर माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि जनअपेक्षा पुरा गर्न सकेन । दुई तिहाइबाट बुहमत माग्न संसदमा गिड्गिडाउदै बोल्ने अवस्था आएको तपाईको नेतृत्वको सरकार त अहिले यति निकम्मा भयो कि जनता मर्दा पनि संवेदन हिनता देखियो ।
कम्युनिस्टको सरकार हुदा सबै जनताले केहि रहत महसुस गर्नु पर्ने हो । उल्टै तनाबै तनाव छन् ।
हामीले मानी राखेको कम्युनिस्टले कत्तिको अभिभावकत्व महसुस गराएका छन ? पुरा नेपाललाई थाह छ । अझ अहिले त साइबर स्यालहरुले ओलीलाई बा भन्दै छन् । एउटा बा का हैसियतले जती जिम्मेवारी बहन गर्नु पथ्र्यो त्यसको एक प्रतिशत पनि बहन नगर्नेलाई बा भन्नेहरु पनि लाजसरम पचाएका छन् । अझ घाँटी सुक्नेगरी बा भन्दै किन बाका पछि लाग्छन ? हुन त यी छोराछोरीलाई राज्यको दोहन गरेर खुशि बनाएको होलान । कतिपयको मुख बाट सुन्दैछु म हाम्रा बा हुनुहुन्छ हामिलाई के को चिन्ता , केको पिर भनेर ? यो राज्यमाथिको दोहन गरेर छोराछोरी खुशि पारेको होलान र बा भन्छन् ।
आज कोरोना महामारी बढेको छ । त्यसको लागि यति लामो समय पाउदा पनि केहि काम गरेन । जब प¥यो राती तब बुढी ताति भने जस्तै जब मानिसहरु अक्सिजन नै नपाएर मर्न थाले त्यसपछि सरकार अक्सिजन खोज्न थाल्यो । एक बर्ष सम्म उखान टुक्का सुनाएर बितायो ।
अहिले देशभरी अर्को समस्या हो महङगी । महङगी ले आकास छोएको छ । सरकार तीन काला व्यपारीलाई पोस्न तल्लीन छ । देशभरीका सामान्य नागरिकलाई तेल, चिनी लगायत अन्य दैनिक उपभोग्यवस्तु किनेर खानै नसक्ने गरी मुल्यबृद्धि भएको छ । दैनिक सय रुपैयासम्म कमाई नहुने नागरिकलाई तेल किनेर खान समेत मुस्किल परेको छ । अहिले खाने तेलको प्रतिलिटर ३ सय पुग्दा पनि सरकार जिउदो छ कि मरिसक्यो अत्तोपत्तो छैन । सामान्य नागरिकलाइ मुल्य बृद्धिले ठूलो असर परेको छ । साइबर स्यालका बा ले सरकार मनपरी ढङगले चलाएपछि व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मनपरी मुल्य बढाएका छन ।
दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्यबृद्धि अकासिदा र कालोबजारी हुदा राज्य मौन छ । त्यसैले मलाई भन्न मन लाग्यो बाको सरकारमा जनता चिन्तामा डुब्न बाध्य भए ।
प्रधानमन्त्रीको आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा देशबासीले दुःख पाए । त्यसको परिणाम अहिले आम नेपाली जनताले भोगी रहेका छन । एक तर्फ नागरिकलाई कोरोना महामारीसंग जुध्नु परेको छ । अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर कयौ मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ । दोस्रो तर्फ कालोबजारीको मारमा जनता परेका छन् । तपाई र तपाइलाई बा भनेर उफ्रनेहरुले भने अहिलेसम्म जनताले भोगेका दुःख कस्टको बारेमा कहि कतै चिन्ता चासो व्यक्त गरेको सुनिदैन सुनिन्छ त राजनीति दल, तीनका नेताहरुलाई गालि गरेको छुद्र भाषा मात्र सुन्न पाइन्छ ।
अझ दुनियालाई अति उपदेश दिने गर्नु हुन्छ जुन कत्तिपनि सुहादउदैन । संविधान मिचेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु भयो । अदालतले उल्टाइ दियो । तपाईले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने हो । त्यसपछि पनि ३ पटक शपथ खानु भयो लाज सरम पचाएर । अझ तपाई अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउने लाज सरम भन्ने पनि कुनै चिज हुन्छ हो प्रधानमन्त्री ज्यु ।
यो महामाहरी आउने कुरा सुन्दासुन्दै, बुझ्दाबुझ्दै पनि केहि तयारी गरेनौ । उल्टै अम्बाको पात खाए कोरोना सोरोना भाग्छ भन्दै भद्धा मजाक गर्यौ । परिणामः भारतको संक्रमण दरलाई पछ्याई रहेको छ नेपालले पनि । मृत्यु दर पनि बढ्दै गएको छ । तपाई अहिले राजनीतिक कहर (सत्ता, कुर्सि, अहंकार, घमण्ड) गतिबिधिमा लागेका छौ ।
तपाईमा अलिकति पनि सवेदनशीलता र लचकता भएको भए यो देशले यस्तो दुर्दशा भोग्नु पदैन थियो । अनि जनताले कसरी सरकार भएको महशुस गर्ने , तपाईको सरकारको काम जनताको पक्षमा भएको भए अलिकति पनि सरकार अभिभावक हो भन्ने महसुस गर्थे होलान । तर तपाई त कुर्सी, पदकोलागि र तपाईको वरीपरि भएका भ्रष्टाचारी ,अपहरणकारी बचाउन तल्लीन हुनुहुन्छ । देशको लागि हो भने जनता बिना को देश कसरी बन्छ ? म त भन्छु तिम्रो लडाई कुर्चिको लागी हो ।
यस्तो स्वास्थ्य संकट कालको अवस्थामा त यति गैरजीम्मेवार छौ , कसले बढी कमिसन दिन्छन् भन्दै कुर्दै जनता सम्म खोप ल्याउन चाहदैनौ । तर चुनाव भने दुई महिनामै गराई हाल्छु भन्दै भाषण गर्न छोड्दैनौ ।
धन्न हौ हामी नेपाली तपाई जस्तो सन्कि तानाशाहको शासन तीन बर्ष भोग्यौ । म त भन्छु अब एक दिन पनि भोग्नु नपरोस । अदालतले नेपाली जनतालाई एक पटक पुन न्याय देओस ।